Amalungu neMigangatho neMibandela - Ukufundwa kweengqondo kwi-Intanethi
Ukufundwa kwengqondo kwi-Intanethi > Iibhondi > Amalungu neMigangatho
UMegan January 25, 2019 IibhondiShiya Comment kwiMigomo neMigangatho
Imigaqo yesi sivumelwano ("isiVumelwano") lawula ubudlelwane phakathi komsebenzisi ngamnye (njengeLungu okanye uMvakatjethi) kwelinye icala kunye neDuodecad IT Services Luxembourg S.àl (apha emva kokubizwa ngokuba yi "DDITS") kunye nedilesi ebhalisiweyo 44, iAvenue John F. Kennedy, uL-1855 Luxembourg, i-Grand Duchy yaseLuxembourg ngaphesheya.
I-DDITS ngumsebenzisi we-Oranum.com. Iwebhusayithi ekhankanywe ngasentla ichazwa ngokuba yi-"Website".
Ilungu / Umthengi / uMbhalisiUmsebenzisi obonisa ukufikelela kwiinkonzo ze-Oranum.com.
isivakashiUmsebenzisi ongena kunye / okanye ukutyelela iWebhu ngaphandle kokubhalisa kwiinkonzo zesayithi.
So sasazoI-Psychic enikezelayo ibonisa, ixubusha okanye idibana neendwendwe zesayithi.
Ukulinganisela KwemaliAbasebenzisi banethuba lokufumana iiCredits, ukuhlawula iinkonzo ze-premium, ngokuthenga iipakethi. Iintlawulo zikhutshwe ngokukhuselekileyo ngabaprocedisi bethu bokuhlawula, kunye neeCredits ezithengiweyo ngenxa yoko ziboniswe kwi-akhawunti yeLungu njenge-balance balance.
Ukuxoxa ngokukhululekileyo / UkusasazwaInketho engavumelekanga yokusebenzisana noMsasazo ngendlela yokubhala imiyalezo ebhaliweyo.
Uxubano lwangasese / Ukusasazwa kweNyangaIinkonzo zokusasazwa kwexabiso-zongezelelweyo apho Amalungu avunyelwe ukubhala okanye ukuthetha (ukuthetha ngezwi) kunye nabasasazi ubuso nobuso, okanye kwiqela namanye amaLungu ekukhutshweni kwabasebenzisi jikelele.
Umqhubi weWebhuIthetha iDDITS.
Ngokungena kunye / okanye ukubhalisa kwiwebhusayithi uvumela imvume yakho kwaye uyamkele oku kulandelayo:
I-1.1Oranum.com iyona shishini elilodwa kunye nelungelo elikhethekileyo lokusasaza umthengi (B2C) kwi-intanethi ye-intanethi ye-intanethi ye-intanethi.
1.2Abasasazo baxoxa baze baqhube ukusebenza ngokubambisana kwewebhu nakwiindibano zocweyo, phambi kwekhamera yabo, kubaBhalisi kuwo wonke umhlaba, abakhethileyo ngokwemimandla yabo yomdla, imifanekiso, iividiyo kunye neengxoxo zentetho yamahhala ezifumanekayo mahhala kwiwebhusayithi.
1.3I-Subscriber inokukhetha ukwenza inxaxheba kwindlela yesibini yokubonisana ne-Broadcast.
I-1.4Yona kuphela isigqibo soMthengi nokuba uvumelekile ukushicilelwa okanye uhlale ungenanto.
I-1.5ABabhengezi abasebenza kwi-Oranum.com benza njengababoneleli ngeenkonzo ezizimeleyo kwaye banokuthi bangabonwa njengabasebenzi ba-Oranum.com, i-agents okanye abacebisi. Naliphi na iinkonzo ezinikezelwa ngabapapashi ziya kuba yedwa uxanduva loLwakasasazo kwaye akukho naluphi na iingcebiso iingcebiso ezibonelelwa ngabasasazo njengezo ze-Oranum.com.
1.6Prior ukukhetha iinkonzo ezijoliswe kuyo, kubalulekile ukubonisana nomxholo, uluhlu lwamanani kunye neendlela zokuhlawula (amakhadi enkredithi kunye neebhanki, ukuhlola i-intanethi, njl) njalonjalo kwiinkonzo zelizwe lakho. Olu lwazi lufumaneka kwiWebhsayithi malunga nazo zonke iziqulatho.
I-1.7Uhlobo lwezinto eziqulathekileyo eziboniswayo lubonakalisa iimbono zodwa zabalobi babantu ngabanye hhayi iimbono zeWebhusayithi.
2. Iinkonzo kunye neziqinisekiso
IWebhusayithi ihlukaniswe kwiindawo ezizodwa, ezibonelela ngokukhululeka kunye nokuhlawulelwa. IWebhsayithi isongeza rhoqo iinkonzo ezintsha ukwenzela ukulungiselela iimfuno zababhalisi bayo.
BIwebhusayithi yenza, kumlinganiselo ovunyelwe ngumthetho, akukho miqinisekiso okanye izimvo malunga nolwazi, iinkonzo okanye iimveliso ezinikezelweyo okanye malunga nesevisi. Ukusetyenziswa kwababhalisi benkonzo kubungozi babo.
CLeWebhsayithi ifuna, ngamaxesha onke, ukuba inikezele ngamnye uMbhalisi ngomxholo ophezulu kunye neenkonzo ezikhoyo. Nangona kunjalo, ayikwazi ukunika iwaranti yokuthengisa, ukufaneleka kwayo nayiphi na injongo, okanye engekho iziphumo zokusetyenziswa komxholo ngokuchaneka kwazo, ukuchaneka, ukuchaneka kunye nokuthembeka okanye ngenye indlela.
KUNYE I-Website okanye nayiphi na iqela elibandakanyekayo ekudaleni, ukuvelisa, okanye ukunikezela inkonzo okanye umxholo unesibophezelo nasiphi na umonakalo othe ngqo, ongenakwenzeka, ongekho ngqo okanye ohlwaya ngenxa yokufikelela, ukusetyenziswa okanye ukuchazwa, iinkonzo, iimveliso okanye ulwazi olunikeziwe okanye ngeWebhu, ngaphandle kokuchasene nemimiselo esekwe ngezantsi kwesi siVumelwano.
IWebhusayithi ayinaso injongo yokuxhasa iminqweno yokuziphatha okubi; ngoko imithetho emiselweyo isetyenziswe.
I-BOranum.com 'iinkonzo zifumaneka kuphela kubantu abangaphezu kweminyaka yobudala be18 (21 kwezinye iindawo).
I-CPersons ngaphantsi kwe18 (21 kwezinye iindawo) abavunyelwe ukuba ngabaSasazo kwi-Oranum.com.
IThethi yekxaso yewebhusayithi yenza yonke imizamo yokujonga ingcaciso yombhalisi kunye neengxoxo zokuxoxisana nokuphulwa kunye neendlela ezenziwe zifumaneke.
IWebhusayithi inelungelo lokumisa ngokukhawuleza kunye nokusisigxina ngokusisigxina xa igama lesikrini lihlaselayo, okanye ngokukrokrelwa okukodwa.
4. Inkqubo yobhaliso lwababhalisi
ABy ebhalisa kwiWebhu kwaye ngokuwamkela esi siVumelwano, uMbhalisi ngokuvuma ngokucacileyo ukunikezelwa kweenkonzo ngexesha lokurhoxiswa kwaye uMbhalisi uyavuma ngokucacileyo ukuba ulahlekelwa ngokucacileyo ilungelo lakhe lokurhoxiswa / ukukhanselwa ngokufanelekileyo malunga ukunikezelwa kwezi nkonzo. Imvume ekhankanywe ngasentla ifunyenwe ngokuhambelana noMyalelo kwiLungelo lamaThengi (i-2011 / 83 / EC) njenge-25 Oktobha i-2011, etshintshwe eLuxembourg ngoMthetho we-2 April 2014.
BBy ukubhalisa kwiWebhu kwaye ngokuwamkela esi siVumelwano, ababhalisi bavuma ukuhlawulela, ukuhlawula iindleko zokuzikhusela kwaye bahlale bengenanto engafanelekanga kwiWebhsayithi, abaphathi bayo, abalawuli, abameli, amagqwetha, abanini-zimali, abaphathi, amalungu, abameli kunye nabasebenzi kuyo nayiphi na amabango , iilahleko, amatyala okanye iindleko (kubandakanywa neentlawulo zommeli ezifanelekileyo) ezilethwe ngamalungu esithathu avela okanye ahlobene nokuziphatha kwabo, iingxelo okanye izenzo, kunye nokuphulwa kweliphi na ixesha, imeko okanye isithembiso esiqulethwe apha kunye nokuziphatha okungekho mthethweni kwisikhokelo kwesi siVumelwano.
Nangabe umGaqo-mali weBhalisi okanye ukuphulwa kwesiVumelwano samanje, iWebhsayithi inokuphelisa, ngaphandle kwesaziso, i-akhawunti yombhalisi kunye / okanye nayiphi na into ehambelana nayo. IWebhsayithi ayiyi kuba noxanduva lokulahlekelwa ngantoni na ngenxa yokuphela kwalo okanye nayiphina imbuyekezo yembuyekezo okanye ukubuyiselwa imali.
D Isivumelwano Esikhoyo siya kusebenza ukususela ngomhla wokuba uMsebenzisi angena kwiwebhusayithi kunye / okanye kwiRejista yeBhalisi kwiWebhu kwaye uyayivumelana nesi siVumelwano; liya kuhlala isebenza kuze kube yilapho ichithwe ngokufanelekileyo ngenye iqela ngokuthotyelwa ngokupheleleyo ngemimiselo neemeko ezichazwe ngokucacileyo kwesi siVumelwano.
5. Imirhumo, intlawulo yemboleko, ukubuyiselwa imali, ukuziphatha okungekho mthethweni
Umthengi angathengisa iipakethi zetyala eziza kuchitha kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo; ngoko ke ukhetho lweenkonzo kufuneka lubekwe phambi kokubonisana nguMbhalisi womxholo wencwadana, uluhlu lwamanani kunye neendlela zokuhlawula ezenziwe kwiWebhu.
B Umxholo unokukhululeka okanye uhlawule. Ikhetho lokujonga "iividiyo ezibukwayo" likhululekile. Ukuba uMbhalisi unqwenela ukufikelela kwiimpawu zeprayimm (ezifana nokufunda kwangasese), kufuneka ucofe "uqale ukufundwa kwangasese" okanye "qhagamshelana ngoku" ukuqala ingxoxo yevidiyo yangasese kunye noMsasazo apho iikokhithi ezithengiweyo zisetyenziselwa nganye -siseko.
Abakwa-CSubscribers bangasebenzisa inketho ye-Quickbuy ngexesha leemiboniso zangasese nabasasazo. Ukusetyenziswa kwalolu hlobo kuya kubangela ababhalisile ukuba, ngokukhawuleza nangokuzenzekelayo, baphakamise ibhalansi yabo yekhredithi kunye nephakheji ekhethiweyo ngexesha lokubonisa.
Abakwa-DSubscribers bangasebenzisa kwakhona i-smartbuy feature ukuze banandiphe imiboniso yangasese ngaphandle kokuphazanyiswa. Isici sivumela inkqubo ukuba iphakamise ngokuzenzekelayo ibhalansi yekhredithi yeBhalisi xa ibhalansi ye-akhawunti iwela ngaphantsi kwee-credits ze-7. Ngokungagqibekanga i-smartbuy ithenga ipakethe ye-27.99. Nangona kunjalo ilungu linokukhetha ukutshintsha inani lokuthenga le-smartbuy.
Iimpawu ziyaziswa malunga nokuthengwa ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo rhoqo xa kwenzeka, ngezaziso ze-imeyli ngokuzenzekelayo kwaye zingenza ukuba kubekho umgangatho phantsi kwezicwangciso zabo ze-akhawunti.
I-FCustomer Service inokunikela ngeembuyekezo kwiimeko apho ababhalisile behlelwa yilahleko yezemali kwaye kuphela kwimiba yezikolo ezithe zenziwa kwisiganeko esinikeziweyo. Ukumangalelwa ukuba ukufunda akuzange kuqaphele akukwazi ukuba yinto esekelwe kuyo nayiphina imbuyekezo. Inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali ibandakanya iinkonzo ezihlawulwe kuphela kwaye kungekhona iziganeko ezenzeka emva koko; I-Oranum.com ayinayo impembelelo kuzo zonke iziganeko ezibonakalayo ezivela kubomi babhalisi. Iikhredithi ezifunyenweyo ngaphandle kweentlawulo zangempela (kunye namakhuphoni, amakhadi wesipho, intlawulo, njl.) Azikho phantsi kwembuyekezo.
Ukuba umthengi wenqatshelwe ibhanki, isici se-SmartBuy siya kupheliswa ngokuzenzekelayo. Emva kokuba ilungu lenze ukuthengwa ngempumelelo, uphawu lwe-Smartbuy luya kuvuselelwa kwakhona.
H Ukusetyenziswa kwanoma yiyiphi inxaxheba ekubhekiselelwe kuyo izakutshintsha indlela yokuhlawula eyiyo ekhoyo ebekwe ngabaBhalisi.
Ukuzaliswa kwe-akhawunti enikezelweyo (intlawulo ekhoyo ehlawulwa kwiipakethi zeekhredithi) kuxhomekeke kwindawo yendawo apho i-akhawunti yenziwe khona. Kucelwa uthathe ingqalelo ukuba leWebhsayithi inelungelo lokufumana amanani ajikelezayo ngoko ke, iya kuba nelungelo lokufaka isicelo sokujikeleza.
Kwimeko yemibuzo, DDITS iya kuba nakho ukukunceda ngokubhekisele kwintengiselwano yakho eyenziweyo ngababoneleli ngenkokhelo abohlukeneyo, ngokunxibelelana nomboneleli ekuthethwa ngaye. Ke ngoko, kulwazi lokubhila kunye nokuxhasa abafowunelwa abalandelayo kufuneka basetyenziswe: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy yaseLuxembourg okanye uthumele i-imeyile ku [Imeyile ikhuselwe] IWebhusayithi ayigcini kwaye ayifikeleli kwiinkcukacha zentengiselwano.
KFor ulwazi lweendleko zebhanki, umthengi ngamnye kufuneka abonisane ngqo nebhanki yakhe.
IWebhusayithi ayiyi kuthatha uxanduva kulo naluphi na ubunzima obuvela ngaphandle kweWebhu.
Isikhalazo esininzi kufuneka sibekwe, kwiiyure ze-24 zibalwa ukusuka kwinto eyenzekayo, kwiNkonzo yabathengi be-Website. Ngenxa yobunzima kunye neenkcukacha zenkqubo yokuqinisekisa ubulungisa bezikhalazo ezibekwe emva kwexesha le-24 elibhekiselelwe kulo, ezi ziza kuvunywa kuphela xa kunzima amandla. Iqela leenkonzo zamakhasimende leWebhsayithi linokuthi, xa libonwa liyimfuneko, liphandle ngenyameko iingxelo kunye nolunye ulwazi oluchanekileyo, lusetyenziswe naluphi na uhlobo olukhoyo lwefuthe elinjalo.
Ngokuhambelana nokurhoxiswa kombhalisi wokurhoxisa / ukukhansela ngokufanelekileyo ngokwemigqaliselo (IV-A) kwisiVumelwano samanje, akukho mbuyiselo okanye isicelo sokukhansela siya kwamkelwa kwimeko apho uMbhalisi sele eqalile ukuqeda i-credit package ethengiweyo. Eminye imbuyiselo yinto enokwenzeka ngokwemiqathango echazwe kwezi zilandelayo zigatshana.
IWebhsayithi iya kuhlawula kuphela imali yokubuyiselwa kwemali ngokwemali ehlawulwe ngokumalunga nexabiso elihlawulwayo kunye nengxaki echazwe ngempumelelo xa kukho nawuphi na umboleko olahlekileyo ngenxa yokungasebenzi kweWebhu okanye uMsasazo ngokupheleleyo kwaye wenqaba ngokucacileyo ukubonelela ngenkonzo aqhelekileyo kwakuthetha ukubonelela okanye ukuba wavuma ukubonelela.
I-PDue kwinkqubo yokuhlawula isetyenzisiwe kunye nabaprotshini yokuhlawula intlawulo yesithathu, kuphela imali efana nayo ingabuyiselwa yona eyayihlawulwa ngokuthe ngqo ekuthengeni (oko kungabikho ukubuyiswa kwemali yeepakethe ezithengiweyo zithengwa). Kule njongo nantoni na kuphela inxalenye yeengxowa-mali isetyenzisiwe, ukubuyiselwa imali kuya kwenzeka kuphela ngokubuyisela iikhredithi kwi-akhawunti yakho. Akukho mali yokubuyiselwa kwembuyekezo iya kwenzeka. Ukubuyiselwa kwemali, xa kunokwenzeka ngokubhekiselele ngasentla, kuya kukhutshwa ngokusetyenziswa kwendlela efanayo yentlawulo ukuthengwa kwenziwe kunye. Inani elihambelana neengxowa-mali liza kuncitshiswa kwi-balance balance. Ezinye iindlela zokuhlawula azivumeli ukubuyiselwa imali ngenxa yezizathu zobugcisa. Iimali ezichithwe kwiinkonzo ezinxulumene nazo, njenge-FanClub umrhumo, I-Surprise, i-Sneak Peak, i-Model Channel kunye / okanye iSpapshot kunye kunye / okanye imilayezo engaxhunyiwe kwi-intanethi / eyimfihlo, ayixhomekeke kubuyiselwa kwimbuyekezo.
QNokubhekiselele apha ngasentla, iWebhsayithi ayiyi kuba noxanduva lokuziphatha kakubi, ukukhutshwa okanye ukungabikho kwemthethweni kwanoma yiyiphi i-Subscriber, okanye nayiphi na ukuhluleka komsebenzi, iphoso, ukungaphumeleli, ukuphazanyiswa, ukususwa, ukusilela, ukulibazisa ukusebenza okanye ukuhanjiswa, ukungaphumeleli komgca wokunxibelelana, ukweba okanye ukutshatyalaliswa okanye ukungena ngemvume okungagunyazisiweyo, ukuguqulwa okanye ukusebenzisa iirekhodi, ingaba phantsi kwesivumelwano okanye i-theory, okanye ngaphantsi kwesiphi na esinye isizathu esenzayo, nawuphi na umrhumo ngaphezu kwexabiso elihlawulwe nguMbhalisi kwiWebhusayithi.
I-RUnder iimeko, kubandakanywa, kodwa kungagqithwanga, ukunganaki, iWebhusayithi okanye nayiphi na iinkampani ezinxulumene nazo, ezinxulumene nazo zimele zihlawulwe nakweyiphi na ingozi echanekileyo, engahambelaniyo, engahambelaniyo, ekhethekileyo okanye ehlawulwayo ngenxa yokusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa le nkonzo, ngaphandle kokunyanzeliswa kokumiselwa kwesiqendu samanje.
Izicwangciso zokuziphatha ngokungathembeki ezihambelana nokuthengiswa kwe-intanethi zilawulwa ngokugcinwa kwezinto eziphambili, nangona kunjalo, kwingqondo yobumfihlo beBhalisi. Amatyala anjalo angaphunyezwa kwiinkampani ezizodwa kulolu hlobo.
UThe Subscriber uyamkela ukuba xa kukho nayiphi na into yokukhwabanisa iWebhusayithi inelungelo lokusebenzisa lonke ulwazi olufumanekayo ngexesha layo nayiphi na inkqubo yomthetho. Kubandakanywa, ngaphandle kwebango lokugqiba, umlando wesibhrawuzi, idilesi ze-IP kunye ne-imeyile kunye nayiphi na enye imisebenzi elandelwayo. Ngexesha leenkqubo zomthetho iWebhsayithi ingabandakanya amanye amaqela ophando ophando kunye nokwabelana ngolwazi oluthile ukwenzela ukuthobela iimfuno zomthetho, ukuqinisekisa amalungelo alo kwaye ubonise imfuno ebalulekileyo yabathengi bayo. Umbhalisi uza kuhlala enetyala lokuphanda okanye ukuqokelela iindleko ezihambelana naluphi na ukuthengiswa kobuqhetseba.
IWebhsayithi inikeza intsebenziswano epheleleyo kwiziphathimandla zomthetho ukuphanda ukuthengiselana kwemicimbi yokukhwabanisa kunye neminye imiba ewela phantsi kolawulo lomthetho kwaye iphendule kwi-subpoenas kunye nemiyalelo yenkundla.
Umbhalisi uyavuma ukuba iWebhusayithi inelungelo lokuhlawula iintlawulo ezihlawulwayo njengembuyekezo / ukubuyiselwa kwembuyekezo, ngoko ke iya kuba nelungelo lokufaka isicelo sokujikeleza.
Xa abantu abasha babhalisa kwiWebhsayithi, bangathenga iiphakheji kunye nezikwere zebhonasi. Olu khetho lufumaneka kuphela ngexesha elinye lokuthengwa kwamatsha abasebenzisi bokuqala; Ubhaliso olutsha lwe-akhawunti yedwa kwiWebhusayithi alanele ukuba kuthathwa njengomsebenzisi omtsha. Amalungu asele enza i-10 ukuthengwa kwempahla ipakethe angakhetha ukuthenga iiphakheji kunye nezikwere zebhonasi. Iiphakheji zebhanki zeBhonasi azifumaneki neCCBill kunye nokuthengwa kwefowuni. Iikhredithi zeBhonus ziyinxalenye yentlawulo epheleleyo yeekhredithi, kwaye ngoko ke ukubuyiselwa imali akunakwenzeka emva kokuchitha kwi-Website.
Abakwa-XSubscribers banokuqinisekisa ikhadi labo lekhredithi kunye nokuthengiswa okuncinci kwintsebenzo enokuthi banelungelo lokufumana izikweletu ze-9.99. Isixa sokuthengiswa kwembuyekezo siya kubuyiselwa ngokukhawuleza kumsebenzisi wekhadi lesikweletu. Izikhredithi ezikhankanywe ngentla apha azifumaneki kumaLungu asele anelungu kwiWebhusayithi eqhutywe yi-DDITS, nangona ukuthengiswa kwabo kuqinisekiswa kuya kubuyiselwa ngaphandle ngaphandle.
Iindleko zeAll kunye neendleko ezinxulumene nentengiso zifakwe kwixabiso elibonisiweyo leepakethe zeebredithi. IWebhusayithi inelungelo lokuguqula amaxabiso avela ekutshintsheni kwamaxabiso okutshintshwa kwemali.
Umbhalisi ugunyazisa leWebhsayithi kunye / okanye nayiphi na enye into phantsi kwemiyalelo yeWebhu, ukubeka iliso, ukurekhoda nokuloba yonke imisebenzi yam inthanethi kwiWebhusayithi (kubandakanye ingxoxo, ividiyo, i-imeyile).
BU-Subscriber uyavuma kwaye uyavuma ukuba nayiphi na impahla ebhaliweyo okanye nayiphi na imisebenzi yasekuqaleni eyenziwe phantsi kwesi siVumelwano kunye / okanye xa usebenzisa iiNkonzo zeeWebhu (kunye nawo wonke amalungelo kuwo, kuquka, ngaphandle kokunciphisa, ilungelo lobunikazi) lingeye kwaye liya kuba yipropati yodwa kunye lewebhu.
CU-Subscriber uyabelana ngokucacileyo, kwaye uhanjiswe ngaphandle kwembuyekezo, kwiWebhsayithi kunye / okanye nakweyiphi na into ebambe iqela phantsi kwemiyalelo yeWebhu, iziphumo, umxholo kunye nemali yeembonakalo zakhe (kubandakanya zonke ezo ukubonakala okwenziwe kwangoku) iividiyo, i-audio, ingxoxo, iingxoxo, izicatshulwa, izenzo kunye namavidiyo okufundisa kunye neengcebiso, zonke ezo ziyinxalenye yeenkonzo ezinikezelweyo-kubandakanywa nawo onke amalungelo okumbhali kwizinto ezikhankanywe ngasentla, ukuvuselelwa kunye nokwandiswa kwamalungelo ehlabathi jikelele kunye kulo lonke ixesha elifanelekileyo lolo lungelo. IWebhsayithi okanye nayiphi na into ebambelela phantsi kwemiyalelo yayo iya kuthathwa njengababhali bayo kuzo zonke iinjongo kunye nomnini wawo wonke amalungelo, isihloko kunye nomdla, kuzo zonke iintlobo kunye nomlinganiso ngexesha lokubambisana kwamalungelo, kubandakanywa nayiphi na isandiso kunye nokuvuselelwa, yonke indawo.
DIwebhusayithi ingasebenzisa iphinde iphinde ishicilelwe, ishicilele, isasaze, ihlele, icacise, ibonise kwaye ixhaphaze igama lam (okwenene okanye eliqingqiweyo), ifane, persona, ukusebenza, ilizwi, imifanekiso, ingxoxo, ividyo, i-audio, ulwazi lwezinto eziphilayo kunye nokuchongwa, kunye neengxelo , nangayiphi nayiphi na into esebenzayo, ngokupheleleyo okanye inxalenye, nakuyo nayiphi na imidiya kunye nemimiselo eyaziwa okanye eyifundwayo, ngokusetyenziswa kuyo yonke indawo, ngaphandle kokukhawulelana, kubandakanywa nokuthengiswa, ukuxhaphazwa nokupapashwa.
EThe Subscriber akayi kunika nayiphi na ulwazi.
FU-Subscriber apha akhankanye ngokucacileyo nayiphi na amalungelo kwaye uxela ukurhoxisa nayiphi na ibango, kumlinganiselo ovunyelwe ngumthetho ukuba nayiphi na into eyenziwa yiWebhu iphula amalungelo akhe onke, kubandakanywa kodwa angagcini kumalungelo okuziphatha, amalungelo okuzimela, amalungelo okubhengezwa, okanye amalungelo, kunye / okanye amalungelo okuthenga ngetyala kwizinto eziphathekayo okanye iingcamango ezibekwe kuyo.
GIzibonelelo zeBhalisela kwiWebhsayithi, abaphumelelayo, iilayisenisi kunye nabanikezeli abanelungelo lokusebenzisa nayiphi na iifoto ezithathwe nguye (nge-webcam okanye ngezinye iindlela) kwaye zithunyelwe ukuba zishicilelwe kwisayithi, ngaphandle kokuhlawulwa kwakhona kwiimpapasho eziprintiweyo, kwi-intanethi okanye nge-CD, okanye nayiphi na enye imidiya, ngaphandle kwemingcele.
HU-Subscriber ngalokhu ubeka ngokucacileyo nayiphi na intlawulo yemali malunga nawaphi amalungelo anikwe, adluliselwe okanye anikwe kwiWebhsayithi phantsi kwesi siVumelwano.
I-Subscriber ichaza kwaye uyavuma ukuba akayisebenzisi egameni lomntu osemthethweni kodwa njengomthengi ngamnye kwaye akukho nhlobo ukuthengwa kweenkonzo phantsi kwesi siVumelwano kungaqwalaselwa njengengxenye yecandelo lakhe lomsebenzi.
7. Imisebenzi yoMbhalisi
Umbhalisi uyavuma ukukopisha, ukuzalisa, ukushicilela, ukukhuphela, ukuhambisa kunye / okanye ukwenza i-public inikwe nayiphi na imimiselo / izinto ze-Website ngaphandle kwemvume yangaphambili yeWebhusayithi.
BI-Subscriber uhlawuliswe ngokugcwele nakwezo naziphi na iinkcukacha ezingamanga kwaye zijongene nazo naziphi na izimangalo zomthetho ezinokuvela kwi-viewing, ukufunda, okanye ukukhuphela izinto kunye nemifanekiso equlethwe kule website.
CU-Subscriber uthatha uxanduva olupheleleyo lokugcina ukhuseleko lweakhawunti yakhe kunye nephasiwedi.
DU-Subscriber akayi kucwangcisa ukuqeshwa kwabantu ngabanye naluphi na uMsasazo, kuba kuvunyelwe.
I-Subscriber ayinakusebenzisa amagama angcolileyo, ayisongela okanye aphikisana nayo, okanye aphule amalungelo abo baveleli, abaxhasi, i-Oranum.com inkxaso yabantu okanye ulawulo lweWebhu, kuba akuvumelekile.
Umxholo we-FText uthunyelwe okanye uthunyelwe kwaye igama lomsebenzisi elikhethiweyo aliyi kuba lihlambalaza, okanye lihlambalaze. Ukongezelela, igama lomsebenzisi olikhethayo xa ubhalisa kwiWebhsayithi akuyi kuba neenkcukacha zakho malunga nawe (njengegama lakho langempela) okanye ulwazi olunokuvumela omnye umntu ukuba axhume
GU-Subscriber akayi kusebenzisa amagama kunye namagama angasebenzisi awamkelekanga ngokwemigangatho yentle, ebonisa ukuphulwa komthetho okanye ukukhohlisa abanye.
HU-Subscriber uya kwazisa, ngokukhawuleza iWebhsayithi yeyiphi indlela engekho mthethweni yabasasazo, kunye naluphi na ukusetyenziswa kakubi kweempawu zokuthengisa, iimpawu kunye / okanye umculo obhalisiweyo.
UmBhalisi akayi kucela, athenge okanye athengise nayiphi na impahla okanye angene kuyo nayiphi na ishishini okanye ajongane nabaSasazo.
JUmthumeli akayi kuthatha naziphi na iingcebiso, isincomo okanye isiphakamiso esenziwe yiNkampuphuli njengengcebiso engcali, ukuphonononga nayiphi na ingcaciso enikwe yona kunye nokwenza ngokuzithandela kwakhe.
8. Ukukhanselwa kokubhalisa
AAbabhalisile banokhetho lokungabhalisi naliphi na ixesha kwiiNkonzo zeeWebhusayithi.
BUkucinywa kobhaliso kunokufezekiswa ngokundwendwela i-Website 24 / 7 iZiko leeNkonzo zabaThengi okanye ngokuthumela i-imeyile ku [Imeyile ikhuselwe]
IKnce i-akhawunti ikhanseliwe, isimo seBhalisi siya kutshintsha "Siyacinywa" kwaye zonke iinkcukacha ezihambelana nentlawulo ziya kugcinwa.
DLeWebhsayithi inelungelo lokumisa okanye ukurhoxisa nayiphi na into yokubhalisa xa kwenzeka ukuphula umthetho nawuphi na ixesha lesi siVumelwano okanye nayiphi na imigaqo engekho mthethweni yoMbhalisi kwisakhelo sesi siVumelwano kwaye udibanise nawaphi na amagosa afanelekileyo, kubandakanywa kodwa angagqibekanga ekuqaliseni nasiphi na isikhalazo sobugebengu kunye nokuqhagamshelana nombuso xa kuthathwa njengimfuneko.
9. Iinkcukacha zomntu kunye neMigaqo Yobumfihlo
Xa uhamba kwiWebhusayithi yethu, xa ugqiba ukubhalisa njengeLungu, kunye / okanye ukusebenzisa izixhobo zeWebhusayithi yethu, uya kubelana kunye / okanye siya kuqokelela ulwazi oluthile malunga nawe. Kucelwa ufunde ngokucophelela iMgaqo-nkqubo Yobumfihlo, ecacisa indlela esiqokelela ngayo, sisebenzise kwaye sabelane ngolwazi lwakho lomntu kunye nezigqibo onalo malunga nokusetyenziswa kwedatha yakho.
BI-Subscriber ayinayo kwaye ayiyi kunika nayiphi na ingcaciso engamanga kunye / okanye amaxwebhu kwi-Website. Ngako oko, Uyabona ukuba iWebhsayithi inelungelo lokukhawuleza, kwaye ngokungahambisani nesebenze, ukuphelisa isiVumelwano samanje ngokukrokrelwa ngokuthe tye.
Inkqubo yeWebhu iyahlangabezana nemigangatho yokhuseleko ye-PCI DSS, umgangatho obekwe yiVisa / MasterCard ebeka iimfuno ezinqongqo.
Ukufikelela kwabasebenzi beWebhsayithi kwiphina ulwazi lomntu lwabaBhalisi banqatshelwe kwaye babophelelwe zibophelelo zobumfihlo. Ngoko ke, banokuthi bangaphantsi kwamanyathelo okugweba, kuquka ukupheliswa kweemvumelwano zabo kunye neemeko ezinzulu nangokutshutshiswa kolwaphulo-mthetho kufuneka bahluleke ukuhlangabezana nale miqathango.
10. Ukusebenza kunye noKhuseleko
IWebhu yileSayithi yeTeknoloji esekelwe kwiTeknoloji esebenzisa i-teknoloji ebizwa ngokuba yi-"Shared-Object" ngenjongo yokuphucula amava omsebenzisi.
CIqela leNkxaso lihlola yonke imilambo kwiiwebhusayithi ze-24 iiyure ngosuku, iintsuku ze-7 ngeveki.
Ngenxa yokuqulunqwa kwayo ngokukodwa, i-website ayizange ibe naluphi ulwaphulo olunzulu lokukhusela.
IWebhusayithi ayithumeli imilayezo yogaxekile kwaye ayiyi kukhuthazelela ugaxekile, ukuxhathisa kuzo naziphi na izenzo ezinxulumene nogaxekile.
B Ezi zilandelayo zibhekwa njenge-spamming:
Ukukhusela imilayezo, njenge-header email, ithunyelwe kwi-computer yeeNkqubo zeeWebhsayithi ngendlela enokukhohlisa ababhalisi beWebhu.
Ukubuyisela i-imeyile kwiinkonzo zeposi zamanye umntu ngaphandle kwemvume yaloo mntu wesithathu.
Ukuthumela, ukuthumela okanye ukuhambisa ukuthunyelwa kobuxoki, ulwazi olukhohlisayo okanye okunye ngokuchasene nomsebenzi webhusayithi.
Ukusebenzisa okanye ukubangela ukuba kusetyenziswe iinkqubo zekhompyutheni zeWebhusayithi ukulungiselela ukuhanjiswa kwezinto ezingafunwanga okanye ezingagunyaziswanga. Oku kubandakanya naziphi na izinto zokuphromotha, ii-URL okanye nayiphi na enye ifomu yokungceli okungagunyazisiweyo onokuyilayisha, ukuposa, i-imeyile, ukuthumela okanye ukuyenza ibe khona.
Ukulayisha, ukuthumela, ukuthumela i-imeyile, okanye ukuthumela umyalezo ofanayo, i-URL, okanye ukuthumela amaxesha amaninzi.
Ukuphazamisa ukuqhutyelwa komxholo weengxoxo ngokuthumela imilayezo ngokulandelelana ngokukhawuleza, ngamaxesha amaninzi, usebenzisa iibrari ezinkulu kuphela okanye ngenye indlela isebenza ngendlela echaphazelayo abanye abasebenzisi abakwazi ukubandakanya ukutshintshana kwexesha langempela.
Ugaxekile kwiNkqubo yeWebhu okanye ukuphazamisa abaBhalisi bayo kukuphulwa kweMigomo neMibandela.
CIwebhusayithi yenza konke okusemandleni ayo ukukhusela ababhalisi bayo kwimiphumo engabonakaliyo yogaxekile.
D Ukusetyenziswa kwazo zonke iinkqubo zomthetho kuqwalaselwa ukuba u-spamming ubangela ukulahlekelwa kwi-Website.
Ngokubhekiselele apha ngasentla, iWebhsayithi xa igunyazisiwe ngabaBhalisi, ngokwemiqathango yesivumelwano samanje, ingathumela i-imeyli yokuphromotha malunga nayo kunye neyo-iqabane layo-Iwebhusayithi kunye nayo yonke i-imeyile iya kuba nekhetho lokuzibhalisa kwiluhlu lokuposa .
AbaBhalisi be-FRegistered bafumana i-newsletters ngokumalunga ne-Website. Imilayezo ethunyelwe kubaBhalisi yimiyalezo yokuthengisa okanye ubudlelwane. Ukubhalisa kunye nokungazibhalisi kwii-newsletters kuthatha iqhosha elilodwa. Nayiphi na imilayezo yokupapashwa izothunyelwa kuphela ukuba uMbhalisi ubonise imvume yakhe yokufumana iinkonzo ezinjalo zokuthengisa.
Kwimeko ye-GIn Ababhalisi bangathanda ukuchaza ugaxekile, kuyacetyiswa ukusetyenziswa ko "Myalezo ukuxhasa umsebenzi" kwi-akhawunti yam okanye ukuthumela i-imeyile ku [Imeyile ikhuselwe] Iqela lenkxaso leWebhusayithi liphanda zonke iingxelo ngokukhawuleza.
ISebe leNkonzo ye-12.1Customer linokuqhagamshelana nalo:
Ukuxhaswa kweNkxaso ye-Intanethi
"Umyalezo kwiNkxaso" umsebenzi weakhawunti yabathengi;
Ukuthumela i-imeyile ku- [Imeyile ikhuselwe]
Ukuthumela ileta ku: L-1855 Luxembourg, 44, iAvenue John F. Kennedy, uMkhulu-Duchy waseLuxembourg
Esi sivumelwano sibeka ukuqonda okupheleleyo kunye nokugqibeleleyo phakathi kwabaBhalisi kunye neeWebhsayithi ngokubhekiselele kwimiba yalo, kwaye iphakamisa yonke ingqiqo okanye izivumelwano ngaphambi kokuba zibhalwe okanye zivakalwe.
Ukuthengwa okungahambisani nomthetho okanye okuchazwe ngenye indlela, ilungiselelo ngalinye le Mvumelwano liya kusinda ekupheleni.
CIf nayiphi na isahlulo sesi siVumelwano singathi singanyanzelwanga yiNkundla yegunya elifanelekileyo, ayiyi kuchaphazela ukunyanzeliswa kwamanye amanxalenye kwesi siVumelwano.
Iqela eliphambili kunoma yiliphi iifom zokunyanzelisa imiqathango apha iya kuba nelungelo lokufumana iifayili zakhe ezifanelekileyo.
Ukuba iWebhsayithi iguqula imiqathango yesi siVumelwano, iWebhsayithi izakufaka isethi ehlaziyiweyo yemimiselo kunye neemeko kwiWebhsayithi kunye / okanye izothumela isaziso sokutshintsha kunye / okanye uthumele ababhalisile isaziso se-imeyili malunga noshintsho ngaphambi kokuphunyezwa kweenguqulelo.
FIf naluphi na utshintsho olwamkelekanga kuMbhalisi, uyayeka ukusebenzisa iWebhusayithi kunye neenkonzo zayo kwaye akwazi ukuphelisa ukuthenga kwakhe. Ukuba akayekanga ukusebenzisa iWebhu kunye neenkonzo zayo, uya kuthathwa ngokuqinisekileyo ukuba wamkele ukutshintsha.
GInguqulo yesiNgesi iya kunqoba zonke izitatimende zomthetho, izibhengezo ezisemthethweni ezenziwe yiWebhu, kubandakanywa nesiVumelwano samanje. IWebhsayithi ayamkeli naziphi na izibango zomthetho, okanye ezinye izikhalazo zokungaqondani ngenxa yesiphumo sempazamo.
Esi sivumelwano kunye nobudlelwane obuvela kuyo, iWebhsayithi kunye nabaBhalisi baya kulawulwa ngumthetho we-Grand Duchy yaseLuxembourg.
IMIBUZO evela phakathi kweWebhsayithi kunye nabaBhalisi iya kulungiswa ngokukhawuleza kwaye kuphela xa esi sixazululo singekho kakuhle, igunya elifanelekileyo leengxabano ezivela kwesi siVumelwano ziya kuba yinkundla yeSixeko saseLuxembourg.
Ngokubhalisa kwiwebhusayithi uvumelana nabo bonke abakhankanywe ngasentla.
Ngamana 9, 20190 Comment
Ngamana 7, 20190 Comment
Matshi 23, 20190 Comment
Februwari 26, 20190 Comment
UYA KU 65% Ukuya e-Evesboro Psychic
Oktobha 10, 20180 Comment
Ukuya ku-5% Ukuphuma kwi-Toy Psychic
Gcina ku-50% Phuma kwi-Mount Erie Psychic
Jabulela i-5% Phuma kwi-Massadona Psychic
Jabulela i-20% Phuma kwi-Mahanoy City Psychic
Shiya A Comment Rhoxisa impendulo